Isifo sesifuba somoya | Health Content
SIYINI ISIFO SESIFUBA SOMOYA?
Isifo esijwayelekile esingapheli sephaphu esibangela ukuvuvuka kwe-brochi nokuyiciphisa,bese kongezeke ukukhiqizwa kwamafinyila amaningi abangele ubunzima bokuphefumula.
IZIMPAWU ZESIFO SESIFUBA SOMOYA ?
Ukukhwehlela (kakhulu ebusuku nasekuseni).
Isiguli sizizwa sicinene esifubeni.
Inkinga yokulala okubangelwa ukuphelelwa umoya,ukukhwehlela,noma inkinga yokuphefumula nzima nokuthimula njalo.
Ukuphefumula nzima noma umsindo wenkwele nxa uhefuzela.
YINI EBANGELA UKUHLASELA KWESIFO SESIFUBA SOMOYA?
Ngaphandle: impova yotshani kanye neyezihlahla/yemithi noma izimila.
Endlini :izilwane zasekhaya,uthuli kanye nezikhunta.
Izidakamizwa ezithile kaye nezithasiselo zokudla.
Impazamisa ezisemoyeni njenge ntuthu,amafutha amakhemikhali kanye nephunga elinamandla.
Isifo esithathelwanayo:ngokuvamile izifo zokuphefumula ezincane,njengomkhuhlane noma imfuluwenza namakhaza.
ukuvivinya umzimba, nakho kungase kubangele ukuhlaselwa.
Ukucindezeleka okungokomzwelo nokukhathala
Ukwabela okunamandla kokungezwani nento ethile.
Izinga lokushisa Nomswakama:Ukushintsha ngokushesha kwezinga lokushisa,ukushisa nokubanda okukhulu,isimo sezulu esinenkungu,esinogqoqwane nesibandayo
IZABA ZOKWEHLISA IMBANGELA YOKUCINDEZELEKA.
Qonda impawu ezibangela ukucindezeleka ukuphephisa ukucindezeleka.
Zama ukwehlisa ukudla eyandiswe imikhiqizo yedairy.
Xoxisana nodokotela ngokudla okungakuphephisa ekuhlaselekeni njengamaqanda, isoya, iwheat kanye neshellfish, izithasiselo zesulphite (ezisetshenziselwa ukucubungula nokulungiswa kokudla).
Bheka *amabhakteria amahle. *amaprobiotics- ukugcwalisa izithako eziqukethe amabhakteria aphilayo,ukuvuselela amasotsa omzimba emathunjini, okwenza kube lula ukusetha impendulo yokuvuvukala.
Ukudla amavitamins ikakhulu ivitamin C, D ne E ukulekelela amasosha omzimba wakho kusiza ukulawula kokuvuvukala,cela udokotela ahlole igazi lezinga le”D” batuse umthamo ofanelekile.
Ngeza izinga lokusebenzisa amafutha:iomega-3 fatty acids ephakathi emafutheni inosizo ukulwa ukuba nokuvuvuka kwizinhlaka .Sebenzisa leyo enegramu ezimbili kuya kwezintathu ziphelele Iomega-3, noma iDHA neEPA ihlangene.
Gcina inasal passage icacile:sebenzisa isaline spray ukuthi ihlale icacile inasal passage. Lokhu kokwehlisa ubunzima kuma airways wakho kosiza ukuphefumula kalula – nokuphelisa ipost –nasal drip.
Phefumula kancane kancane: amasu okuphefumula angakwazi ukusiza ngezibonakaliso zesifuba ezifana nehyperventilation noma ukucindezeleka kwemizwa.
I- allergy shots (ungabuza udokotela ngayo).